गर्भावस्था फ्लोरोग्राफेआव्रापोग्राफे24 को समयमा फ्लोरोग्राफीको सुविधाहरू। तिमी.त्य
कुनै पनि जीवन परिस्थितिहरूको बिरूद्ध कोही पनि पक्का हुँदैन, जसमा एक्स-रे आवश्यक छ। यो हड्डीहरूको फ्रैक्चर हुन सक्छ, निमोनिया, क्षयरोग वा दन्त चिकित्सकको दाँतको एक प्राथमिक स्न्यापशट। यो सबै सामान्यतया प्रतिबिम्ब र जम्मा बिना गरिन्छ, तर केवल गर्भावस्थाको बखत, यो प्रक्रिया उपयुक्त छ। यस अवस्थामा, हानी अनुमान गरिएको छ कि बच्चा र अन्य तलाहरूलाई लागू गर्न सकिन्छ।
एक्स-रे प्रभाव बच्चामा आमाको गर्भ
सम्भावित हानीको स्केललाई मूल्या assess ्कन गर्न आवश्यक छ, किनकि वयस्कको शवले आमाको पेटमा झगडाको जीवलाई भन्दा कम क्षति पाउँछ। एक्स-रे रेहरू शरीरको चट्टानको सौन्दर्यमा प्रवेश गर्ने अंगहरू मार्फत हाम्रो शरीर नजिकै, अंगहरू को डाटा सर्कुटको छविको कारण। विभाजन कक्षहरूको माध्यमबाट किरणहरूको प्रवेशको प्रक्रियामा डीएनए श्रृंखलाको रूपमा, परिणाम स्वरूप - सेल नोक्सान भित्रबाट सेल नोक्सान।
र अन्ततः म्युट्टल कक्षहरू हुन सक्छ, खोलिएको हुन सक्छ, यो सबै यस अवैधताको तहमा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण गर्भावस्थाको क्रममा X-रेले वयस्कको तुलनामा बच्चालाई बढी क्षति पुर्याउँछ, किनकि यसको अधिकांश कोषहरू गठ्ना चरणमा छन्।
गर्भावस्था प्रवाहको प्रत्येक चरण यसको संलग्नताहरूको विशेषता हो, यसैले, एक्स-रेको नतिजा फरक हुन सक्छ।
गर्भावस्थाको सुरूमा, जब फल खाली छ, मुख्यतया एक नर्भस प्रणाली हो। स्नायु प्रणाली जीवित जीवको आधार हो।
यसमा नकरात्मक प्रभावको घटनामा, बच्चा पछि मानसिक असफलता वा अन्य न्यूरोलजिक रोगहरू देखा पर्न सक्छ।
यदि गर्भावस्थाको छैठौं हप्तामा एक्स-रे पास गर्न आवश्यक छ भने, यसको परिणाम एड्रेनल ग्रन्थीहरूको कामको लागि एक उल्लंघन हुन सक्छ, जुन केवल परिभाषित गर्न सकिन्छ बच्चाको ढिलो उमेर।
चौथो हप्तादेखि शुरू गरी, एक्स-रेले मुटुको समस्या निम्त्याउन सक्छ, मुटुको मांसपेशिको दोषहरू, गिलिने गर्दछ। सातौं हप्ता गर्भावस्थाको बखत X-RAR ले फारम ग्रंथिको गलत गठन हुन सक्छ। बाह्रौं हप्ताको नजिक, बच्चाको शरीरमा विकिरणलाई एनीया, लेगमिया, हड्डी मज्जाको कार्यलाई दबाब दिन सक्छ।
त्यसैले एक्स-रेको आवश्यकताको सर्तमा एक विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने जब गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिकको आधारमा एक्स-रेको आवश्यकताको आधारमा विशेष सावधानी अपनाइएको छ। पछि अवधिहरू अलि अलि कमतान्त्रिक सम्भावना कम गर्दछ, तर अझै, तपाईंले यस सम्बन्धमा प्रतिबन्धहरू बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
गर्भावस्थाको क्रममा एक्स-रे गर्न सम्भव छ
X-रे गर्भावस्थाको क्रममा कि यान्-रे बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नसँग अपठ्ठा जवाफ हुँदैन। यो प्रक्रियाको जटिलता र जरुरीतामा निर्भर गर्दछ, जुन आपतकालिन केसहरूमा गरिन्छ।
एक अस्पष्ट आकलन र दायित्वमा एक डाक्टरमा एक्स-रे मा एक गर्भवती मा लिन्छ। यस प्रक्रियाप्रति अस्वीकारले अवांछनीय परिणामहरू, विशेष गरी आमा वा बच्चाको घातक नतिजा निम्त्याउन सक्छ।
अंगहरू हड्डीहरूको फ्र्याक्चर अनुमान गर्न, एक एक्स-रे ढालसँग बनेको छ। यस प्रक्रियाको क्रममा, मोहित ओभरलीहरू, aprons, पेट, छाती र श्रोणिहरू सुपरइम्पोज छन्।
<< P> आधुनिक रेडियोग्राफीको लागि, उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ, जुन उनीहरूको पूर्ववर्ती भन्दा कम क्षतिग्रस्त छ। तर अधिक शक्तिशाली विकिरण, अधिक एक संभावना छ कि फलहरू पहिलो घण्टामा पहिलो घण्टामा स्थिर छ। यस अवस्थामा, त्यहाँ समान प्रक्रियाका दुईवटा मात्र दुई फाइनली प्रकारहरू छन् - या त फल फ्रिज गर्दछ, वा थप विकासमा जारी गर्दछ।
गर्भावस्थाको समयमा रेडियोग्राफी आवृत्ति।
<< p> स्वतन्त्र रूपमा बाहिर जान वा हड्डी टुक्राहरू बदल्ने कडा निषेधित छ। यदि आघात बहिष्कृत दाबी गर्दछ कि एक्स-रे बिना यो गर्न असम्भव छ, यसको अर्थ समझदारी देखाउनु हो र सबै आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु हो। फ्रैक्चररको असुरक्षित बेस्बिलि illing ्गले गम्भीर पीडा, मौसम परिवर्तन भएकोमा घाइतेहरूको प्रतिक्रियालाई, माथिल्लो वा तल्लो चरमपन्यहरूको प्रतिक्रिया, जोर्नी र अन्य धेरै पीडादायी जटिलताहरूको गम्भीर रोगहरू।
गलत रूपमा कुनै व्याकुलताको अधिकारमा, ले समेत Mismaplic PoDicic पनि नेतृत्व गर्न सक्दछ, स्थिर दु: ख, गलत जोर्नीहरू र हड्डी संरचनाको गठन।
यी केसहरूमा थप, प्रकाश, क्षयरोगमा, फनेममोनिया, फोक्सोमोनियाको क्यान्सर हटाउन एक्स-रेलाई फालिनेमा तोक्न सकिन्छ।
यस अध्ययन बिना, कुनै स्पष्टता छैन जुन महिलालाई यस्तो हुन्छ र स्वस्थ बच्चा हुने सम्भावनाहरू हुन्छन्।
X-रे व्यापक रूपमा गिलबलाडिडी र नेपलासमूहको उपलब्धताको लागि ढुवानीको उपलब्धताको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
यदि स्थितिले आमाको जीवन र स्वास्थ्यको स्वास्थ्यलाई खतरा सिर्जना गर्दछ भने, विख्यात रूपमा गर्भावस्थामा X-रे गर्न सक्दछ।
त्यसोभए, गर्भावस्थाको क्रममा एक्स-रे हो? कक्षहरूमा X-रेसहरू पार गरिसकेपछि, ठूलो संख्यामा नि: शुल्क कर्डिक्स गठन गरियो, जसले सेल डिभिजन प्रक्रियालाई असर गर्न सक्छ, निम्ती र डिभिजन असफलताहरू। एक पटकमा महिलाको शरीरको सबैभन्दा प्रतिकूल अध्ययनहरू जब यो गर्भवती हुन्छ, पहिचान:
यी घटनाहरूमा सब भन्दा कठोर विकिरणहरू संलग्न छन्, जुन सम्भवतः भ्रुणको विकासको पत्यागले गर्दा हुन सक्छ।
मुख्य कारण मुख्य उर्जा इलेक्ट्रोमग्नेटिक छालहरूमा वयस्क भन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, यो यो हो कि बाँच्नका लागि संरचनाहरू गठन गर्दछ। । यदि कुनै पनि चरणमा थोरै महत्त्व छ भने, पछि यसले पैतृकता जीवनतर्फ नभएर पाथोलोजी गर्न सक्छ।
जटिलताहरू र परिणामहरू
गर्भावस्थाको शुरुको अवधिमा आमालाई परम्परा उत्पन्न हुँदा विशेष गरी प्रतिकूल प्रभावहरू खडा हुँदा, मुख्य नर्भस केन्द्रहरू गठन हुन्छन्।
2 हप्ता सम्म प्रभावले टुक्रिएको गर्भावस्थामा पुर्याउन सक्छ, यस मामलामा मृतक तुर्ताले गर्भाशयले गर्भाशयलाई सदस्यता लिनेछ।
<< p> प्रारम्भिक चरणमा मुख्य खतरा भनेको स्टेम कोषहरू विभाजनको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु हो, जुन सबै टिश्यु र अंगहरूको स्रोतको रूपमा काम गर्दछ।
यदि आमाको अवैधता करीव weeks हप्ता भयो भने, एक्स-हप्ता एक बच्चाको पछिल्लो हार्मोनल dyssfunss को खतरा हो।
त्यहाँ कलेजोमा सम्भावित जोखिम छ। जब हृदय र मुख्य जहाजहरू विकास हुन्छ, एक्स रेडल विकास, मांसपेशीहरू वा जहाज भित्ताहरू हुन सक्छन्।
0 को लागि7हप्ता पहिले एक पूर्व ग्रंथि गठन भयो, त्यसैले यस अवधिमा कट्टरपन्थी हस्तक्षेपले एक बच्चाको प्रतिरक्षा असफलता निम्त्याउँछ।
लगभग weeks हप्ता गर्भावस्थाको करीव पाचन अ organs ्गहरू, प्लीहाहरू हुन सक्छ। Weeks हप्तामा, ब्रोननहरू, ओर्वुरीहरू र भ्रुण दाँतका दाँतहरू कमजोर छन्।
दोस्रो त्रैमासिकमा संक्रमण पछि, एक मात्र प्रणाली जसले बढ्दो कमजोरीलाई रक्तस्राव राख्छ। अब Anemia को जोखिम पूर्ण रूपमा हटाएको छैन।
फ्लोरोग्राफी (फ्ल्याग) - एक निदान विधि - तपाईंलाई हृदय र एक्स 1 15 बर्षमा पुग्ने सबै बिरामीहरूको पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ । किनकि विधिले शरीरको विकिरणलाई संकेत गर्दछ, यो बच्चाहरूको साथसाथै स्थितिमा निषेध गरिएको छ।
भविष्यको बच्चाको लागि खतरनाक फ्लोराटोग्राफी के हो?
फ्लोराग्राफीको परिणामहरू जटिल, नाबालिग वा अनुपस्थित वा अनुपस्थित हुन सक्छ। यद्यपि डायग्नगोलिक पछि कसरी बच्चालाई कसरी विकास गर्ने भनेर ठ्याक्कै कुनै पनि विशेषज्ञता दिन सक्दैन। अतिरिक्त कारकहरू सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामलाई असर पार्ने आमा, जीवनशैली (उपद्रव वा हानिकारक बानी, पोषणको उपस्थिति), परिणामस्वरूप विकिरण थुप्रोत,
बिभिन्न समयमा गर्भावस्थामा
यदि उर्फको माध्यमबाट बच्न असम्भव छ भने, यो आफैंलाई विभिन्न शब्दहरूमा निदानका सुविधाहरूसँग परिचित हुनु आवश्यक छ।
फ्लन्टिज पारितको लागि सबैभन्दा खतरनाक अवधि गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिक हो, किनकि पहिलो बीस हप्ता पछि त्यहाँ भ्रुण विकास र भविष्यको बच्चाको गठन छ। प्रारम्भिक समयमा एक्सोपोजर रोगबिलोइज र गम्भीर आनुवंशिक रोगहरू उक्साउन सक्छ। एउटा अपवाद गर्भावस्थाको पहिलो हप्ता हो - यस समयमा फल अण्डाले गर्भाशयको भित्तामा संलग्न हुने समय छैन।
यदि तपाईंले गर्भावस्थाको बारेमा पढाइ अघि पत्ता लगाउनु भयो भने, यो तपाईंको डाक्टरलाई यसको बारेमा सूचित गर्न निश्चित गर्नुहोस्, यसले सम्भावित जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्न र आवश्यक छ, जेनेटिक्स विशेषज्ञहरूलाई पठाउने छ।
<< p> सबै भन्दा राम्रो समाधान फ्लुटोक्लोग्राफी र बुबा र आमा परिवारमा पुनःपूर्तिको योजना हुनुभन्दा केही महिना अघि हेर्नु हो।
दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा, जोखिमहरू कम हुन्छन्। बच्चाको आन्तरिक अंगहरू गठन भइसकेका छन् र कार्य गर्न थालिसकेका छन्, तर यस अवधिमा त्यहाँ व्यक्तिगत निकायहरूको अवसरको घटना बढ्नको लागि स्थगित गरी स्थगित गर्न पनि योग्य छ। विकिरणको कुनै पनि खुराक प्राप्त गर्दै गर्भावस्थाको सम्पूर्ण अवधिमा अवांछनीय हुन्छ।